:: My Little World ::: April 2007
Happy 30th Pearl Wedding Anniversary
Posted by Nay Nay Naing at 4/30/2007 01:11:00 PM4comments
အလုပ်လေးတွေရှုပ်၊ စိတ်တွေမကြည်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘလောခ့်တောင် Update မလုပ်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်ရှုပ်တာကတော့ Computer ကို OS တွေ ဟိုဟာပြောင်းသွင်း၊ ဒီဟာပြောင်းသွင်းနဲ့စမ်းနေတာပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေပေမယ့်လဲ ဟိုလာရှုပ် ဒီလာရှုပ်ကိစ္စလေးတွေက ပေါ်လာတော့ စိတ်ထဲ သိပ်မကြည်လင်တာနဲ့ဘာမှရေးလို့ မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေကို မပြောလိုက်ရပဲ လူမှု့ ရေးအရ သည်းငြီးခံနေရတာ သူများတွေအတွက် ဘယ်လိုနေမလဲတော့ မသိဘူး ကျွန်မအတွက်တော့ အတော်လေး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေရပါတယ်။ အပြောအဆိုမတတ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အတော်လေး ဆိုးပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ အပြောအဆို မတတ်လို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောလိုက်တာပေါ့၊ ခံရသူကတော့ မသက်သာလှပါဘူး။
စိတ်ရှုပ်နေတာနဲ့Comments တွေကိုတောင် Reply မလုပ်ဖြစ်မိဘူး။ ကျွန်မတာဝန်မကျေသလို ဖြစ်နေတယ်။ Comments ရေးပေးခဲ့သူ၊ ဒီဘလောခ့် လာဖတ်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တော့ Computer ကလိနေတာကိုလည်း ရပ်လိုက်ပြီ၊ စိတ်ရှုပ်နေတာတွေကိုလည်း ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အနားယူတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုတ်လုပ် ကြည့်နေပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကတော့ အတော်များပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက အကြိုက်ဆုံးကတော့ "မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ" ဆိုတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား ဇာတ်ကားပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်က အင်္ဂလိပ်ကားတစ်ကားကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ မူရင်း ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်ဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ မူရင်းရုပ်ရှင် နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒီကားဟာ ပြန်ရိုက်ကား ဖြစ်ပေမယ့် ခုခေတ်ပြန်ရိုက်တဲ့ ကားတွေလိုမျိုး မဟုတ်ပဲ ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဟိုရန်ကုန်မှာ ရှိနေတုန်းကတည်းက မြန်မာအသံက စနေည၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ လယ်နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးည တွေမှာ မြန်မာဇာတ်ကားဟောင်းတွေလာရင် အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။ စန္ဒာ အကယ်ဒမီရတဲ့ နှစ်မွှာအသည်း ( နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါပဲ) တို့၊ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ... အို... ကားဟောင်းတွေ အများစုက အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်တွေ ပြန်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ ခုခေတ်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ တကယ့်ကို တခြားစီပါလို့ ဆိုရမယ်။ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဟာ တစ်ခေတ်ထက် တစ်ခေတ် တိုးတက်မလာပဲ ဆုတ်ယုတ်လာတယ်ပြောရမယ်။
ဒီရုပ်ရှင်လင့်တွေကို နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ ညီမလေး မဒီဂျွန်က တင်ပေးထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်မှာ BurmeseClass Logo ပါနေတော့ အဲ့ဒီ Site မှာတင်ပေးဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို Download လုပ်ထားတာလို့ ထင်တယ်။ Streaming ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖို့ စိတ်မရှည်တဲ့ ကျွန်မကတော့ ဒီလို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
Used HJSplit to Join this movie.
Credit to YZNW and MadyJune from NativeMyanmar
Posted by Nay Nay Naing at 4/29/2007 05:44:00 AM2comments
အမြဲသုံးနေရတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ဖြစ်တဲ့ " Let it be " ဆိုတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို ခုတလော နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။
1970 က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်းနေပေမယ့် ကောင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ Beatles ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်မထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ဒီသီချင်းထွက်ခါစက US မှာ No 1, UK မှာ No2ရခဲ့တယ်။ Rolling Stone မဂ္ဂဇင်းကရွေးချယ်တဲ့ the 500 greatest songs of all (2004) မှာ No 20 ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီသီချင်းကို ရေးသူ Paul McCartney က သူ့ မိခင်ကို အိပ်မက်မက်ရာကနေ ဒီသီချင်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ သီချင်းထဲက "Mother Mary" ဆိုတာ သူ အသက် ၁၄ နှစ်တုန်းက ကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ သူ့ ရဲ့ မိခင် ဖြစ်သူကို ရည်ညွန်းထားတာလို့ရေးထားတာဖတ်ဘူးပါတယ်။ သီချင်းရေးသူရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Linda McCartney ရဲ့ funeral မှာ Final Song အနေနဲ့ဒီသီချင်းကို ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ဒီသီချင်းက နားထောင်တဲ့ အခါတိုင်း ခံစားချက်တစ်မျိုးကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/27/2007 11:48:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 4/27/2007 04:36:00 AM 1 comments
Start Your Day with Smile... Enjoy!!
Posted by Nay Nay Naing at 4/26/2007 10:05:00 AM0comments
JUnit - isaunit testing framework for the Java programming language.
JUnit ကို Java Programmer တိုင်းသိကြမှာပါ။ Java နဲ့ ရေးထားတဲ့ Application တွေ Unit Testing လုပ်ဖို့ ဆို JUnit ကို အများဆုံး သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။
JUnit ကို အသုံးပြုရတဲ့ Java Programmer တွေ အတွက် ဒီ JunitFactory ဟာ အလွန်အသုံးဝင် နိုင်ပါတယ်။ JUnitFactory ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် JUnit Code တွေ ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ JUnitFactory Site မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Java Program တွေကို Upload လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ Website ကနေပြီး JUnit Code တွေကို Auto Generate ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။
JUnit Factory ကို အသုံးပြုမယ်ဆို နည်းလမ်း နှစ်မျိုးနဲ့ သုံးနိုင်တယ်။
1. The browser-based demo
ပထမနည်းက သူတို့ ရဲ့ Website မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Program ကို Copy and Paste လုပ်ပေးတဲ့ နည်းပါ။ ဒီနည်းက Single ၊ Stand-alone Java Class တွေ အတွက်ပဲ သင့်တော်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Demo Page မှာ ရေးပြီးသား Code တစ်ချို့ ကို တင်ပေးထားတာ ရှိတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။
2. The Eclipse plug-in
ဒုတိယနည်း ကတော့ Eclipse Plug-in ကို သုံးပြီး ကိုယ် JUnit Code ထုတ်ချင်တဲ့ Project/ Package/ Class ကို ရွေးပြီး သူတို့ Site ကို Upload လုပ်ပေးတဲ့ နည်းပါ။ ဒီနည်းသုံးဖို့ ဆို JUnitFactor ကနေ Plugin ကိုအရင် Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ဖို့ တော့လိုတယ်။ Java IDE အနေနဲ့ Eclipse ကိုပဲ သုံးရပါမယ်။ အခု လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ JUnitFactory က Eclipse IDE တစ်ခုတည်းကိုပဲ Support လုပ်ပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု စဉ်းစားရမှာက အဲ့လို Upload လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ Project Code တွေ အားလုံး သူတို့ စီ ရောက်သွားမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မ အလုပ်မှာဆို Code တွေက confidential တွေပါ။ အပြင်လူတွေကိုတောင် ပြခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ JUnitFactory ကို သုံးရတာ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် JUnitFactory ကလည်း လူတိုင်းကို Free အဖြစ် သုံးခွင့်ပေးထားလို့ သာ ဒီအခြေအနေကို တာဝန်မယူတာပါ။ သူတို့ ရဲ့ တခြား Service ဖြစ်တဲ့ agitarone ကို ၀ယ်ပြီး သုံးလို့ ရကြောင်းကို FAQ မှာ ရေးထားတာတွေ့ ရတယ်။
AgitarOne အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သိရုံလောက်ပဲ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်က စမ်းကြည့်ရုံ၊ တချို့File တွေအတွက်ပဲ သုံးမှာ၊ ၀ယ်သုံးဖို့ လည်း စိတ်ကူးမရှိသေးတော့ JUnitFactory နဲ့ တင် လုံလောက်ပါတယ်။ အင်း.... နောက်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင် Software Company ထောင်နိုင်မှပဲ AgitarOne အကြောင်း အသေးစိတ်သိအောင် ထပ်သွားဖတ်တော့မယ်။
Source: JUnitFactory.com , Agita.com
Posted by Nay Nay Naing at 4/25/2007 09:01:00 PM2comments
ဒီနေ့ကျွန်မကို MR.Programmer က Tag Game တစ်ခု ကစားပါဆိုပြီး သူ့ ဘလော့ခ်မှာ Tag လုပ်ပါတယ်။ 10 weird things about me ကို ချရေးရတယ် Game ပါ။ ဟိုနေ့ ကတင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဲ့ဒီ Game ကို Tag လုပ်လိုက်ရမလားလို့လာမေးသေးတယ်။ မလုပ်နဲ့ငါဖြေဖြစ်မယ် မထင်ဘူးလို့့ပြောလိုက်တော့ နင်ဒီလိုဖြေမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားလို့ပြောသွားတယ်။ အကြောင်းသိတွေချင်းပဲ. ဒီလောက်တော့သူလည်း သိမှာပါ။
ခု အစ်ကိုကြီး Mr-Programmer က Tag ထားပြီ။ ဂျောက်တွန်းတယ်သွားပြောရင် အဆူခံရနိုင်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ လဲ မဖြစ်ဘူး။ သူက အကြီးဆိုတော့ လေးစားရသေးတယ်။ :D ( ညီမလေး လင်းလက်ကလည်း ထပ် Tag လုပ်ထားတာတွေ့ ရတယ် )
10 weird things about me ဆိုတော့ တွေးကြည့်တယ်။ ကျွန်မ့ကိုယ် ကျွန်မ ထူးဆန်းတယ်ထင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အကျင့်တွေလား။ သူများတွေက ထူးဆန်းတယ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အကျင့်တွေလား။ စဉ်းစားစရာပဲ။
ခုတလော ဘလောခ့်တွေမှာ အဲ့ဒီ Game ကို ကစားတဲ့အနေနဲ့ရေးထားတာတွေ အတော်များများ ကျွန်မ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ ထဲက တချို့ သူတွေရေးထားတဲ့ အကျင့်မျိုး ခပ်ဆင်ဆင်တွေ ကျွန်မမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ဒါတွေဟာ မထူးဆန်းသလို ၊ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေလို့လည်း မထင်ပါဘူးရှင့်။ ဥပမာ - ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း အစားစားမယ်ဆို ဖတ်စရာ တစ်ခုခုကို အရင်ရှာတယ်။ တွေ့ မှ စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ပဲ အစာစားလေ့ရှိတယ်။ အပြင်မှ Lunch တစ်ယောက်တည်း စားရင်တောင် ဖတ်စရာ စာအုပ်တစ်အုပ် လက်ထဲမှာပါ ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မအတွက် ဘာမှမထူးဆန်းလို့့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် လုပ်နေတာပါ။ ဒီလို တခြားအကျင့်လေးတွေ ကျွန်မမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အကျင့်တစ်ခုဆို ဘယ်သူ့ ကိုမှလည်း မထိခိုက်ဘူး၊ ကျွန်မကို ကျွန်မအတွက်လည်း အကျိုးယုတ်စေတဲ့ အရာမဟုတ်သေးဘူး ထင်နေသမျှ ဆက်လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျန်တာကိုတော့ ထူးလား မထူးလား စဉ်းစားလေ့မရှိဘူး။
ဒါတွေကြောင့်လည်း ကျွန်မဟာ ဆိုဆုံးမရ ခက်သူ တစ်ယောက်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောတာထင် ပါတယ်။ သူပြောတာ ကျွန်မ မငြင်းချင်ပါဘူး။ ကျွန်မ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်တွေမှာ မကောင်းဘူးထင်တာတွေကို ကျွန်မ့ လက်ခံနိုင်အောင် ပြောနိုင်ရင် အဲ့ဒီအကျင့်တွေကို ကျွန်မ ပြင်လိုက်မှာပါပဲ။ တချို့ ဟာတွေတော့ သူတို့ အမြင်တွေနဲ့ကျွန်မအထင်နဲ့မကိုက်သေးတော့လည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကိုပဲ ဆက်လုပ်တုန်းပေါ့။ ကိုယ်တိုင်က ပြင်ချင်ရင် ပြင်မရပဲ ဖြစ်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုတာရှိမယ် မထင်။
ဒီတော့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ထင်တဲ့ ထူးဆန်းတာတွေဆိုရင်တော့ ဘာမှ ချရေးဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ မရှိလို့ ပါ။ weird ဆိုတာ informal very strange and unusual, and difficult to understand or explain လို့Dictionary မှာလည်းတွေ့ တယ်လေ။ ကျွန်မရဲ့ အကျင့်တွေဟာ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မအတွက်တော့ ထူးဆန်းတယ်လည်းမထင်၊ မကောင်းဘူးလို့ မထင်ပဲ၊ဘယ်လိုမှလည်း မထင်၊ ကျွန်မလက်ခံနိုင်နေတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေမို့ကျွန်မလုပ်နေတာတွေလေ။
ကျွန်မ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အကျင့်တွေကို ကျွန်မ ချရေးမယ့် အစား ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးသူတွေကို ရေးခိုင်းတာကမှ အမှန်ရမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မမှာ ဘယ်လို အကျင့်ဆန်းတွေ၊ အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးသူတွေပဲ သိကြမှာပါ။ သိတာလေးတွေ ရှိရင် Comments ပေးသွားလဲ ရပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြောလည်း ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိရတာပေါ့။ ဒါပါပဲလေ...
တွေးမိသေးတယ်.. ဒီလို ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ၊ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်လုပ်တာကိုပဲ weird လို့ ပြောချင်ကြမလားပဲရယ်...... မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါမျိုးတွေ သူများတွေလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 4/25/2007 02:40:00 PM7comments
နေလယ်က အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း အစ်ကိုတစ်ယောက် သီချင်း lyrics တစ်ခုပို့ ပေးတယ်။ စာသားတွေကို မဖတ်အားတာနဲ့သီချင်းခေါင်းစဉ်လေး ကူးပြီး အင်တာနက်မှာ ရှာပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း နားထောင် ကြည့်လိုက်တော့ ဘာဆိုနေလဲ ဆိုတာ နားမလည်ပါဘူး။ သီချင်းခေါင်းစဉ်က Jini – Because I amaGirl တဲ့။ အဲ့ဒီသီချင်း ကောင်းကောင်းသိနေလို့လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ Korea က Kiss – Because I amaGirl ဆိုတာပဲ။ အဲ့ဒီသီချင်း ရဲ့ MTV က နာမည်ကြီးပဲ။ ဟိုတစ်လောကတောင် ဘလောခ့်တစ်ခုမှာ အဲ့ဒီ MTV ကြိုက်လို့ ဆိုပြီး တင်ထားတာ တွေ့ လိုက်သေးတယ်။
Jini က English လိုဆိုထားပေမယ့် Kiss ဆိုထားတဲ့ Korea လို Version က နားမလည်ပေမယ့် နားထောင်လို့ ပိုကောင်းတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း စဉ်းစားတယ်.. အဲ့ဒီ အစ်ကို ဘာလို့ဒီသီချင်းစာသားကိုပို့ လဲ။ သီချင်းက ကောင်မလေးတွေဆိုတဲ့ သီချင်းကြီး။ Jini Lyrics ကို သေချာဖတ်တယ်။ စဉ်းစားမရဘူး။ သိချင်လာတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ ပိုတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ Kiss ဆိုထားတဲ့ MTV ကို ပြန်ကြည့်တယ်။်မသိသေးဘူး။ နောက် Kiss ရဲ့ Version ကို English လို ပြန်ထားတဲ့ Lyrics ကို တွေ့ မှပဲ သူဘာကြောင့် နားထောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ နားလည်သွားတော့တယ်။
Kiss - Because I am A Girl ( Mp3),MTV from YouTube
Jini - Because I am A Girl ( Mp3),Lyrics
The translation of the song in English : ( Korea စကားကို တစ်လုံးမှ နားမလည်ပါဘူး။ သူများစီက ကူးချထားတာ)
ဘာလို့ သူနားထောင်ခိုင်းသလဲ။ တကယ့်တော့ အဲ့ဒီအစ်ကိုကြွားတာကို ကျွန်မခံလိုက်ရတာပါ။ ကျွန်မကို ဒီသီချင်းပို့ တဲ့ အစ်ကိုက ရုပ်ချော၊ သဘောကောင်း၊ အပြောကောင်း၊ လူတော်တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကောင်မလေး တချို့ က စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကြိုက်ကြတယ်ရှင့်။ သူရဲ့ Gtalk Status မှာ အဲ့ဒီ ထဲက ကောင်လေးပြောသလို စကားနဲ့ ဆင်တာမျိုး တင်ထားတာတွေ့ မိသလိုပဲ။ (မသေချာဘူး) ဒါနဲ့ သူ့ စီကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဒီသီချင်းပို့ လိုက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ စီဘယ်သူ ပို့ လည်းဆိုတာကို ကျွန်မ မေးမကြည့်တော့ပါဘူး။ ထပ်မေးရင် ထပ်ကြွားတာ ခံနေရဦးမယ် ဆိုတာ ကြိုသိနေလို့ ပါ။ :P
(ရေးဆိုလို့ရေးလိုက်ပြီး၊ ညီမ ထင်တာ မှားနေတယ်ဆို Comment မှာ လာရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ စွံ့ တဲ့ အစ်ကိုဆိုတာ ဘယ်သူလဲ လူတွေသိကြမှာ... :P.. )
Posted by Nay Nay Naing at 4/24/2007 04:28:00 PM2comments
သခင်အောင်ဆန်း တရား - ဇော်ဂျီ
အဘယ် တရား ဟောမည်နည်း။
လူငယ်အောင်ဆန်း၊ သူ့ အစွမ်းကို
သူ့ အစွမ်းကား၊ အခြားမဟုတ်
ကြုံရာဘ၀၊ မုတလုံလောက်၊ ခံမြို့ဆောက်၏
ရိုးကျင့် မြင့်ကြံ၊ သူ့ အလံတည့်
Credit to Ko_Htike from MyanmarTeaShop
Posted by Nay Nay Naing at 4/23/2007 02:12:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 4/19/2007 11:56:00 AM0comments
ဘ၀မှာ အမြဲပျော်နေနိုင်တဲ့ လူဆိုတာ ရှိရင်တောင်မှ အရမ်းရှားမယ် ထင်ပါတယ်။ လူဖြစ်လာမှတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ သုခ၊ ဒုက္ခ၊ အကောင်း၊ အဆိုး ဆိုတာတွေ အမြဲကြုံတွေ့ နေရမှာပါပဲ။
တချို့ လူတွေက ပြောကြတယ်။ လူဘ၀ဆိုတာ ဘာမှမကြာလိုက်ပါဘူး၊ သက်တန်းတိုတိုလေးပဲ ရှိပါတယ်၊ ဒီခဏတာရခဲတဲ့ ဘ၀လေးမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေကို မေ့ပြီး ပျော်အောင်နေကြပါတဲ့လေ။ အဲ့ဒီလိုပြောနေသူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ သူတို့ ရော အမြဲပျော်အောင် နေနိုင်ကြရဲ့လားလို့ ။ ကျွန်မကတော့ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်အောင် မနေနိုင်ပါဘူး။ ဘ၀မှာ အဆင်မပြေမှု တွေကြုံလာရင် စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အချိ်န်မှာ အပိုစကားတွေလာပြောနေရင် စိတ်တိုပြီး ပိုစိတ်ရှုပ်တတ်ပါသေးတယ်။
အဆင်မပြေမှုတွေဆိုတာ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ အများအားဖြင့်တော့ ကျွန်မမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံလာရင် ငါတစ်ယောက်တည်းမှာ ကြုံရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး တွေးပါတယ်။ (သေဖော်သေဖက် လိုက်ညှိတာပါ၊ အဖော်လေးနဲ့ ဆိုတော့ စိတ်သက်သာရာ ရတာပေါ့)။ ငါ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့တွေးပြီး ဖြေရှင်းနည်းကို ရှာပါတယ်။(ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်တာပါ။ ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်သာရှင်းရမှာမို့စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဖို့ က အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်မိတယ်။) တစ်ခါတလေတော့ ကျွန်မကို သည်းငြီးခံတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စကားတွေ လျှောက်ပြောပါတယ်။ ( စိတ်ညစ်တာတွေမဟုတ်ပဲ တခြားဟာတွေ လျှောက်ပြောနေတာပါ။ ကျွန်မ စိတ်ညစ်ရင် ရင်နှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နားအလွန်ငြီးကြ ပါလိမ့်မယ်။ ) နောက်တစ်ခုကတော့ စိတ်ရှုပ်နေချိန်တွေမှာဆို အလုပ် မရှုပ်ရှုပ်အောင် လုပ်စရာတွေကို ရှာကြံပြီး လုပ်ပါတယ်။ (အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေးဖို့ အချိန် မရှိတော့ဘူးပေါ့။ အလုပ်တွေ လုပ်နေတော့ လူပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်းတော့ ညဆိုလည်း ဟိုတွေးဒီတွေး မလုပ်မိတော့ပဲ အိပ်ပျော်နိုင်တာပေါ့။) ခုနောက်ပိုင်းဆို စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ကြုံလာရင် အစာတွေ အများကြီးစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ (အရမ်းပိန်လွန်းတဲ့ ကျွန်မ့ စိတ်ညစ်စရာတွေစီကနေ အမြတ်ထုတ်ဖို့ကြံစည်နေတာပါ။) ဒါကျွန်မလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်တွေပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ စိတ်ညစ်လာရင် အိပ်နေလိုက်တယ် ပြောဘူးပါတယ်။
ဒီနေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Friendster မှာ "Be Happy" ဆိုပြီး တင်ထားတာလေးတွေပါ။ ကျွန်မ့ သူငယ်ချင်းတင်ထားတာ ၁၂ ချက်ပါ။ No. 13 စာကြောင်းလေးကို အင်တာနက် တစ်နေရာမှာတွေ့ လိုက်လို့ထပ်ဖြည့်ထားလိုက်တာပါ။ ဒါလေးတွေ ဖတ်ပြီး စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်ညစ်တာလေးတွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်ကြပါစေ။
1. Make up your mind to be happy & learn to find pleasure in simple things.
3. Don’t take yourself too seriously. Don't think that somehow you should be protected from misfortune that befalls other people.
5. Don't let your neighbor set your standards. Be yourself!!
6. Do the things you enjoy doing but stay out of debt.?
8. Since hate poisons the soul, do not cherish jealousy; avoid people who make us unhappy.
13. Happiness can not be inherited, purchased, rented, imported, or bargained for. It must be home-grown.
Source: 12 Ways to be happy (Geez.com)
ပြောဖို့ မေ့နေတယ်။ စိတ်တွေရှုပ်လာရင် ဘလောခ့်မှာ ဟိုရေးဒီရေး လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုလည်း ကျွန်မမှာ ရှိပါသေးတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/18/2007 10:03:00 PM2comments
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်(၁၃၆၉ ခုနှစ်) မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး၊ လိုအင်ဆန္ဒများ၊ အောင်မြင်မှုများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 4/17/2007 11:20:00 AM2comments
့မြန်မာပြည်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက် ဆိုတာကို အိမ်ကပို့ တဲ့ အီးမေးမြင်မှ သတိထားမိလိုက်တယ်....
အကြို၊အကျ၊အကြတ်၊အတက် သင်္ကြန် ၄ ရက်တွေဟာ ကုန်ဆုံးသွားတာ အရမ်းမြန်နေသလို ခံစားရတယ်.. မနက်ဖြန်ဆို နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ... နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းသံတွေ ကိုကြားရတော့မယ်...
စဉ်စားမိတာပါ။ သူများတွေ အတွက်တော့မသိဘူး၊ ကျွန်မ သတိထားမိတဲ့ နှစ်ကူးတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ၊ တရုတ်လို၊ မြန်မာလို နဲ့ကရင်လို နှစ်ကူးတာတွေပါ။ မြန်မာပြည်တုန်းကတော့ မြန်မာနှစ်ကူးနဲ့ကရင်နှစ်ကူးကိုပဲ သတိထားမိခဲ့ပေမယ့်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကို စရောက်တော့ အင်္ဂလိပ်လို နှစ်ကူးတာကို ရင်နှီးလာခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိနေတဲ့ နိ်ုင်ငံရောက်တော့ တရုတ်နှစ်ကူးကိုပါ သတိထားမိလာရတယ်။ တရုတ်နှစ်ကူးကို သတိမထားမိလို့ လည်းမရဘူးလေ၊ အဲဒီရက်လေးပဲ အလုပ်ပိတ်ရက် ၂ ရက် ဆက်တိုက်ရတာလေ။ ဘာရယ်မဟုတ် တစ်နှစ် ၄ ခါ လောက် Happy New Year လုပ်သံတွေ ကြားနေရတယ်လို့တွေးလိုက်မိလို့ ပါ။ တကယ်တော့ အဓိက ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တာဟာ မြန်မာနှစ်ကူးနဲ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ပါပဲ။
နေ့ လယ်က သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားအကြောင်းရေးမိလို့ လားမသိဘူး၊ အဲ့ဒီ ဇာတ်ကားထဲက နှတ်ဆက်သီချင်းနဲ့နှစ်သစ်ကူးမှာ ဇော်ဝမ်းပြောတဲ့ နှစ်ဦးဆုတောင်းကို နားထဲကြားရောင်နေမိတယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 4/16/2007 10:10:00 PM0comments
မနေ့ က သင်္ကြန်အကြတ် နေ့ မှာ သင်္ကြန်မိုး ရုပ်ရှင် ကြည့်လိုက်ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှ သင်္ကြန်တွင်း သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင် ကြည့်ရတယ်ဆိုတာ မဆန်းပေမယ့် ကျွန်မတို့ လိုမြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးနေသူတွေအဖို့ တော့ ထူးဆန်း နေပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်ထဲက မကြည့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဒီနှစ်မှပဲ MyanmarMp3.net ကျေးဇူးနဲ့ပြန်ကြည့်ဖြစ်ရတော့တယ်။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင်ဆိုတာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း မြန်မာ့ရုပ်သံတွေက ထုတ်လွှင့်နေကြပါ။ နှစ်စဉ် လာနေကြဖြစ်လို့ကျွန်မတို့ တွေ အခေါက်ပေါင်းများစွာ ကြည့်ဖူးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ၁၉၈၄ က ခွင့်ပြုချက်ရပြီး ရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ အတော်ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ နှစ်စဉ်ပြသဆဲ၊ အကောင်းဆုံး မြန်မာသင်္ကြန်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရပ်တည်နေဆဲပါပဲ။ ဒီထက်ကောင်းဖို့ မပြောနဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ သင်္ကြန်ရုပ်ရှင်မျိုးလည်း နောက်ပိုင်းမှ ဘယ်သူကမှ ထပ်ပြီးမရိုက်နိုင်သေးပါဘူး။ သင်္ကြန်မိုးရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေကိုလည်း သင်္ကြန်တိုင်းမှာ မဆိုမဖြစ် သီဆိုနေကြဆဲပါပဲ။
ဒီပုံက MyanmarMp3 ကပဲ ယူထားတာပါ။
ခုလို သင်္ကြန်မိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ MyanmarMp3 မှ အဖွဲ့ သားတွေ အားလုံးကို ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/16/2007 12:53:00 PM2comments
ဆေးပညာလေ့လာနေသူများအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့ Blog တစ်ခု... ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ Area တစ်ခုမို့အဲ့ဒီမှာ တင်ထားတဲ့ e-Books တွေက ကောင်းမကောင်းနဲ့လေ့လာသူတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင် မပြုနိုင်၊ အကျိုးရှိနိုင် မရှိနိုင်ကိုတော့ ကျွန်မ သေချာမသိပါဘူး။ တခြား E-Books တွေ က ရှာရလွယ်ပေမယ့် Medical နဲ့ ဆိုင်တာတွေတော့ သိပ်ပြီး မတွေ့ ဖူးလို့တွေ့ မိတာလေးကို မျှဝေလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီမှာ e-Books တွေတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ Medical နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Links တွေ တင်ထားတာပါတွေ့ ရပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Medical Field က လေ့လာလိုသူများ သွားရောက် ကြည့်ရှုကြပါ။
Source : Medical-ebooks.blogspot.com
Posted by Nay Nay Naing at 4/15/2007 08:36:00 PM5comments
မြန်မာပြည်ကနေ နိုင်ငံခြားမှ ပညာသင်ကြားလိုသူတွေ သွားကြည့်သင့်တဲ့ Website တစ်ခုပါ။ ဒီ Site ကနေ ဘယ်လောက်ထိ Information တွေပေးလို့၊ ဘယ်လောက် အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မလည်း သေချာ မလေ့လာရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် Information ဆိုတာ များများသိလေ၊ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိလေမို့့ မသိသေးသူများ သိရအောင် မျှဝေလိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အဲ့ဒီ Site ကို သွားကြည့်ကြပါ။
Study-MATE.net is an absolute free and friendly community for every Myanmar/Burmese student who wishes to study abroad.
ကျွန်မ တွေ့ ရသလောက်တော့ Study-MATE ရဲ့ Objectives တွေက ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ Study-MATE က Free (Volunteering group) လို့ ပြောထားပါတယ်။ Australia မှာ အခြေစိုက်တဲ့အတွက် ခုလက်ရှိ မှာတော့ Australia ရဲ့ ပညာရေး Information တွေကို အဓိက ဖော်ပြထားပေမယ့် တခြားနိုင်ငံတွေ အတွက်လည်း ရှိတယ်လို့ဖတ်ရတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်း၊ Website တစ်ခု ဖြစ်လို့ထာဝစဉ် တည်တံ့ပြီး မြန်မာကျောင်းသားတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Objectives of Study-MATE
Study-MATE isavolunteering group to support for Myanmar students who are planning to study outside Myanmar. It isanon-profit information sharing group.
The objectives of Study-MATE are;
1. To encourage young Myanmar students to explore the knowledge at highly qualified educational institutions.
2. To present related information about studyabroad to the Myanmar students.
3. To share experiences of studying abroad.
4. To provide sufficient assistance to newly arrived students from Myanmar or other countries.
5. To provide other useful information for Myanmar students.
6. To exchange information and education online among students.
7. To build "home away from home" community online.
8. To ease discomfort for being alone or being isolated &
9. To facilitate and offer 'help' to each other.
Source : Study-MATE.com
Posted by Nay Nay Naing at 4/14/2007 10:20:00 PM0comments
့ဒီနေ့... သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မှာ ...
ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်....
မန်းမြို့ သူရဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ညီပေ ယဉ်ကျေးသူတွေ
သင်း ပျံ့ ပေ ရွှေမန်းပိတောက်တွေတွဲရွဲနဲ့ လေ
ဘေးဘယဝေးကွာ ကင်းစင်ပမယ့် လေ...
Posted by Nay Nay Naing at 4/13/2007 10:19:00 PM2comments
ပြီးခဲ့တဲ့ Easter အားလပ်ရက်က ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် English လိုရေးတဲ့ "Freedom from fear and other writings" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။
ဆိုထားတဲ့ ဒီစာအုပ်လေးကို တော်တော်များများဖတ်ဖူးကြမှာပါ။ မဖတ်ဖူးသေးသူများ ဖတ်နိုင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
Download : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး (20.6 MB)
ကျွန်မကတော့ ဒီစာအုပ်ကို စာအုပ်နာမည်ကအစ သဘောကျနှစ်သက်မိတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ ဆိုတာ သိရအောင် မာတိကာကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ၏ အမှာစာ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှာစာ)
စာတည်း၏ အမှာစာ (ဒေါက်တာ အောင်ခင်ရဲ့ အမှာစာ)
ဒေါ်သန်းအေးရေးသားသော "စု" နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
နော်ဝေးနိုင်ငံ နိုဘဲလ်ကော်မတီ ဥက္ကဌမိန့် ခွန်း
၁၉၈၄ ခုနှစ် - ၁၉၉၃ ခုနှစ်အတွင်းရေးသား စာတမ်းများနှင့် အထွေထွေမိန့် ခွန်းများ
၃။ ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး
၄။ " ဗိုလ် " ၏ အဓိပ္ပါယ် အစစ်အမှန်
၆။ တော်လှန်ရေး၏ အလယ်ဗဟိုတွင်
၇။ ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
၈။ ပြည်သူလူထုက လွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်သည်
၉။ နိုဘဲလ်ဆုရှင်ကိုယ်စားပြောသောမိန့် ခွန်း
၁၀။ နိုဘဲလ်ကောင်မတီသို့ ပေးစာ
၁၁။ လူ့ အခွင့်အရေးဥပဒေအဖွဲ့ မှ ပေးသောဆုအတွက် မိန့် ခွန်း
၁၂။ စပိန်အိုလံပစ်မိန့် ခွန်း
၁၃။ စစ်မှန်သော လုံခြုံရေးသို့ 
၁၉၈၈ခုနှစ်သြဂုတ်လမှ ၁၉၈၉ခုနှစ် ဇူလိုင် အထိ ပြောကြားခဲ့သော မိန့် ခွန်းနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ
၁၄။ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်မုခ်လူထုစည်းဝေးပွဲ
၁၅။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၁၆။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအမှတ် - ၃
၁၉။ ဇူလိုင်ခုနှစ်ရက်နေ့ 
၂၀။ တပ်မတော်ဟာ ဘယ်သူ့ အတွက်လည်း
၂၁။ န၀တ နှင့် ရင်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေး
၂၂။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအမှတ် - ၆
၂၄။ မိန့် ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်များ
ဒီမှာကတော့ အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ " ဒေါ်သန်းအေးရေးသားသော "စု" နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း " ပါ။ မိုးမခကနေ ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး Download တာ ကြာနေရင် ဒီဟာလေးကို အရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ အောက်ကပုံတွေကတော့ အဲ့ဒီစာပိုဒ်( မိုးမခ) က ကျွန်မ သဘောကျလို့ဖြတ်ယူထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပါ။
Download : Ma Than Aye - Introduction Su (From MoeMaKha) 1.13 MB
Posted by Nay Nay Naing at 4/12/2007 08:00:00 AM6comments
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို အမှန်တကယ်အကျိုးပြုနိုင်မည့် စီပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတွင် ပွင့်လင်းပြတ်သားစွား သုံးသပ် ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်နှင့် အသိအမြင်၊ အတွေးအခေါ်များကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးဖလှယ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိရမည်ဟု ကျမ ယုံကြည်ပါသည်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/11/2007 11:22:00 PM0comments
ဒီနေ့အလုပ်ရောက်လို့အိတ်လေးချပြီး မနက်စာ စားမယ်လုပ်တုန်း sms ၀င်လာပြီး MLG ရှိတယ်၊ လာခဲ့ပါဆိုလို့MGL ဆိုတာ ဘာမှန်း ညာမှန်းမသိပဲ သွားလိုက်ရတာ၊ ညနေ ၅ နာရီ ၃၀ ကျော်လောက်မှပဲ ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ရောက်တော့တယ်။ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံး ဘာအလုပ်မှ မလုပ် လိုက်ရဘူး။ ခုရက်ပိုင်း အလုပ်မှာ လူတွေ တစ်နေကုန် ပျောက်ပျောက်နေတာ သတိတော့ထားမိတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့ မှပဲ Staff တွေ အားလုံး MGL အလှည့်ကြ တတ်နေရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရ တော့တယ်။ One Session ကို လူ ၁၅-၂၀ လောက်စီ တက်ကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့Session မှာတော့ ခွင့်သွားနေသူ များနေတာကြောင့် အာလုံးပေါင်းမှာ ၁၂ ယောက် လောက်ပဲ ရှိတယ်။
MLG ဆိုတာ Making Life Great တဲ့။ Life ကို Great ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ အတွက် Company မှာရှိနေသူတွေ မတက်မနေရ တတ်ရတဲ့ Session တစ်ခုပါ။ ဒီနှစ်အတွက်တော့ 4D Approach ကို အကြောင်းကို နားလည်အောင် အုပ်စုလိုက် Game တွေဆော့ခိုင်း၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ခိုင်းပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ Strengthတွေ၊ Companyရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နားလည်စေပြီး လက်ရှိ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ Idea တွေ မျှဝေတဲ့ သဘောပါပဲ။ သူတို့ အပြောအရတော့ Brain Strong ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့။
ဒီ Session က ကလေးတွေကို ကစားနည်းလေးတွေ ကစားခိုင်းပြီး စာသင်တာနဲ့ တူတယ်။ ဒီနည်းက တမျိုးတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီတိုင်းကြီး သူပြောတာ တစ်နေကုန် ဒီတိုင်း ထိုင်ပြီး နားထောင်နေရမယ် ဆိုရင် ပျင်းစရာကောင်းပြီး ဘာပြောသွားမှန်းတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ကြဘူး။ ခုတော့ 4D Approach ဆိုတာဘာလဲနဲ့ Company မှာ ဆက်ပြီးရှိစေချင်တဲ့ Strangth တွေနဲ့ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောချင်တာတွေတော့ ပြောလိုက် ရတယ်။ ကျွန်မတို့Session ရဲ့ Leader က ဒီ Session က တောင်းဆိုထားတာတွေ၊ ဆွေးနွေးထားတာတွေကို ထပ်ပြီးဆွေးနွေးတောင်းဆိုဖို့နောက် Session တွေ ထပ်တက်ရဦးမယ် ထင်တယ်။
4D Approach ဆိုတာစပြီး ကြားတုန်းက Singapapore Pool ရဲ့ နာမည်ကြီး 4D က စိတ်ထဲမှာ အရင်ဆုံး ပေါ်လာတယ်။ ဒီနေ့ပြောတဲ့ 4D approach ကတော့ ( Discover, Dream, Design, and Deliver)။ ဘာတွေလည်း သိချင်ရင်တော့ Google ကြည့်လိုက်ကြပါ။ :D Dream အကြောင်း ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ကို ဒီ Company ရဲ့ ရှေ့ မှာ ဘာတွေဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ Dream ကို ပန်းချီ တစ်ချပ်ဆွဲပြီး ပုံဖေါ်ခိုင်းတယ်။ ဒီမှာ လူ ၁၀ ယောက်ကျော် တစ်ယောက် တစ်လက် ၀ိုင်းဆွဲတဲ့ ပန်းချီကား။
အဲ့ဒီ အခန်းထဲမှာ တစ်ခြား Group တွေဆွဲသွားတဲ့ ပန်းချီကား ၃၀ ကျော်လောက် ကပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့Group ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားနဲ့ နည်းနည်းလေးတောင် ဆင်တူတဲ့ ဟာမရှိဘူး။ တခြား Group တွေက တွေက ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဆွဲဖို့၄၅ မိနစ် - ၁ နာရီလောက် အချိန်ယူပေမယ့် ကျွန်မတို့Group က ၁၅ မိနစ်နဲ့ပြီးသွားတယ်။ စာတွေ၊ Company Logo တွေ မပါတော့ သိပ်ကျေနပ်တဲ့ပုံ မပေါ်ပဲ ကျွန်မတို့ ကို ဘာလို့ ဒီလိုဆွဲလည်း ရှင်းခိုင်းတယ်။ အားလုံးရဲ့ တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ရှင်းပြချက်တွေ ကြားပြီးမှာတော့ ဒီ ပန်ချီကားကို လက်ခံသွားပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ ကျွန်မ အခု အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company ရဲ့ နှစ်တစ်ရာ ပြည့် အခန်းအနားရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပန်းချီကားတွေကို ပြချင်ပြမယ် ပြောတာပဲ။ ဒီပန်းချီကားကို တွေ့ ခဲ့ရင် မှတ်မိကြပါ။ :D
ဒီနေ့Sessionမှာ အားလုံးအပြီး ပြန်ခါနည်းမှာ အရုပ်လေး တစ်ရုပ်စီ လက်ဆောင်ပေးတာကို ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ရေမြင်းရုပ်လေးပေးမယ့်အစား Compnay Logo ဖြစ်တဲ့ ခြင်္သေ့ရုပ်လေး ပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အလကားရတာကို ဂျီးများနေလို့်မဖြစ်တော့ ပေးတာ ယူလာလိုက်တယ်။ ၂၀၀ရအတွက် ပထမဆုံးရတဲ့ အရုပ်ပါပဲ။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အလုပ်မှာ ကြုံရတာလေးတွေ မှတ်ထားလိုက်တာပါ..
Posted by Nay Nay Naing at 4/11/2007 11:08:00 AM2comments
ဒီနေ့ Forward အီးမေးတစ်စောင်မှာ ပါလာတဲ့ ပုံလေးပါ။ ကျောက်တောင် တစ်တောင်ရဲ့ ပုံလို့ပြောထားပါတယ်။ ဘာပုံပေါ်နေလဲ သိချင်ရင် ခု ဘေးတစ်စောင်း ဖြစ်နေတဲ့ ပုံကို Rotate Right လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာပုံပေါ်နေလဲ တွေ့ ရမှာပါ။
တကယ်တော့ အင်တာနက်မှာ ဟိုပုံ ဒီပုံတွေ Forward ပို့ နေတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ တချို့ ကလည်း တကယ့်ဟာမဟုတ်ပဲ ဖိုတိုရှော့ လို ဟာမျိုးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာတွေပါ။ ခုပုံလည်း Fake ဟာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုပုံနဲ့တကွ ပါလာတဲ့ စာက ထူးဆန်းနေလို့ ပါ။ ဒီမှာကြည့်ကြပါ။
ဒီလိုနေရာ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ရှိလို့ လား။ ပုံထဲက မိန်းမကိုကြည့်ရတာတော့ တရုတ်မပုံ ပေါက်နေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆို မြန်မာမပုံတော့ ပေါ်သင့်တာပေါ့နော်။ တော်ကြာ မြန်မာတွေဟာ တရုတ်ရုပ်မျိုးလို့ထင်သွားကြဦးမယ်။ ခုတောင် ထင်နေကြပါပြီ။ ကြုံတုန်း လေး ကျွန်မကြုံဖူးတာလေး ပြောပြဦးမယ်။ ကျွန်မ အရင်အလုပ်မှာ အလုပ်စ၀င်ခါစကပေါ့၊ ကျွန်မက ဒီက Local ရုပ်မပေါက်တော့ ဘယ်နိုင်ငံကလည်းလို့မေးကြတယ်။ Burma ( Myanmar ) ကလည်း ပြောလိုက်တော့ နင်က မြန်မာရုပ်လည်း မပေါက်ဘူးတဲ့။ ကျွန်မလည်း ပထမတော့ နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်မရုပ်ကိုများ မြန်မာရုပ်မပေါက်ဘူးဆိုလို့ ... ထူးဆန်းသွားတာပါ။ ဒါနဲ့ ဘာလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာလည်းလို့ပြန်မေးလိုက်တော့.. အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ သူတွေ့ ဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်ကဆိုတဲ့သူတွေက ငါတို့ လိုပဲ Chinese တွေတဲ့။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောသေးတယ်။ ကျွန်မကို တရုတ်စကားတတ်လားတဲ့။ ကျွန်မကလည်း မတတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ သူတွေ့ ဘူးတဲ့ မြန်မာတွေ တရုတ်လို တတ်ကြတယ်တဲ့။ ကျွန်မက ငါက မြန်မာပြည်က ဗမာလူမျိုး၊ Burmese လိုပြောတာရယ်၊ English လိုပြောတာရယ် နှစ်မျိုးပဲ ပြောတတ်တယ်။ အဲ့ဒီလူက တအံ့တသြနဲ့သူတွေ့ ဖူးသမျှ မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုတာတွေက တရုတ်လိုတွေ ပြောကြ၊ Chinese လို့့လည်း ပြောကြတယ် ဆိုတော့ သူက မြန်မာပြည်ဆိုတာ ထိုင်ဝမ်လိုမျိုး တရုတ်တွေ နေတဲ့နေရာ ထင်နေတာတဲ့လေ။ တောတောတုန်းတဲ့၊ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ စလုံးကောင်ပါပဲ။
ကျွန်မလည်း ကျွန်မကို မြန်မာရုပ်မပေါက်ဘူး ပြောတာခံထားရတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့သေချာ ရှင်းပြ လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆိုတာ တရုတ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ငါဆို ဗမာလူမျိုး၊ တခြား race တွေလည်း ရှိကြတယ်။ အများကြီးပဲလို့ ။ မြန်မာမှာအဓိက ရုံးသုံး ဘာသာစကားက မြန်မာစာ၊ အရင်က အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုလဲ သုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့မြန်မာလိုသာ အပြောများ ကြတယ်ဆိုတာကို ပြောပြ လိုက်တယ်။ တရုတ်လူမျိုးက ငါတို့ တိုင်းရင်းသာ race တွေထဲမှာတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ တိုင်းပြည်က အရင်က စည်းပွါးရေးကောင်းခဲ့တော့ တရုတ်တွေ၊ ကုလားတွေက မြန်မာပြည်မှာလာပြီ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အတွက် တရုတ်တွေ၊ ကုလားတွေ လည်း ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ များပြီး တခြား သာသာဝင်တွေလည်း ရှိကြတယ်ဆိုတာ ပြောလိုက်တယ်။ ငါက ဗမာလူမျိုးရုပ်လို့ ၊ ဒါပေမယ့် ငါကသာ လူကောင် သေးသေးလေးဖြစ်တာ တခြား ဗမာတွေ ငါ့လို လူကောင်မသေးဘူး ဆိုတာလေးကိုလည်း သေချာထဲ့ ပြောလိုက်ရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စည်းပွါးရေး မကောင်းတော့ဘူး ဆိုတာ ပိတ်ပြော လိုက်တယ်။ တော်ကြာ နင့်နိုင်ငံမှာ စည်းပွါးရေး ကောင်နေရဲ့နဲ့ဒီမှာဘာလို့အလုပ်လာလုပ်တာလဲ ဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ ဆက်လာတော့မှာ ကျွန်မ ကြိုသိနေတယ်လေ။
ကျွန်မ အဲ့ဒီ စလုံးကောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း Website တွေပြ၊ မြန်မာပြည်ပုံတွေပြ၊ မြန်မာ အ၀တ်စားနဲ့ကောင်မလေးပုံတွေ ဘာတွေ ပြလိုက်တယ်။ ကျွန်မစီမှာ အမြဲပါတဲ့ မြန်မာစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီး မြန်မာ စာလုံးတွေက ဒီလိုပုံဆိုပြီး ပြခဲ့သေးတယ်။ ကျွန်မ တော်တော်လေးပြောပြီးနောက်မှာ သူလည်း မြန်မာဆိုတာ တရုတ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ သီးခြား တိုင်းပြည်ဆိုတာ လက်ခံသွားပြီး မြန်မာပြည်ကို တစ်ခေါက်လောက် သွားလည် ကြည့်အုံးမယ် ပြောတာပဲ။ ကျွန်မလည်း ကောင်းတယ် သွားလို့ ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ သူဟာသူ သွားတာ မသွားတာ ကျွန်မစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးလေ။ မြန်မာဆိုတာ သီးခြားဘာသာစကား၊ သီးခြားလူမျိုးတွေရှိပြီး၊ တရုတ်နဲ့မဆိုင်ကြောင်း သူသိသွားရင်ပဲ ကျွန်မ ကျေနပ်သွားပြီလေ။
နောက်မှ ဒီမှာ ကြုံရတာတွေ ထပ်ရေးတော့မယ်။ ခုနက ပုံက အစစ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အသာထား ပုံလေးကတော့ လှသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရယ် လက်အုပ်ချီနေတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်ရယ်။ အဲ့ဒီပုံကို ကျွန်မစီ forward လုပ်တာ ကျွန်မရဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ က အစစ်ထင်လို့forward လုပ်တာလားမသိဘူး။ ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီပုံကို အစစ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့အစစ်သာဖြစ်များ ဖြစ်နေမယ်ဆို ဘယ်နေရာကလည်း သိချင်မိပြန်တယ်။ အတုဆိုလည်း အတုဖြစ်ကြောင်း၊ အစစ်ဆိုလည်း ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေး သိကြရင် သတင်းပေးကြပါအုံး။
Posted by Nay Nay Naing at 4/08/2007 02:26:00 PM7comments
ံHoliday မှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲဆိုတော့ ရန်ကုန်က ၀ယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်၊ အင်တာနက်က ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်လိုက် လုပ်နေပါတယ်။ စာအုပ်တွေ အကြောင်းတော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ်။ ကျွန်မ ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာကားတော်တော်များများ ကြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ မြန်မာ ရုပ်ရှင်တွေ၊ movies တွေတင်ပေးတဲ့ site တွေကိုတော့ တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခါ ကျွန်မ ကြည့်တာ အဲ့ဒီ Site တွေက မဟုတ်ပဲ YouTube မှာ jojudi ဆိုတဲ့ သူတစ်ယောက် တင်ပေးထားတာတွေကို ကြည့်ဖြစ်တာပါ။ ခုလက်ရှိကြည့်နေတာကတော့ ထွန်းထွန်း သရုပ်ဆောင်တဲ့ အသည်းကွဲလူရွှင်တော် ဆိုတဲ့ ကားပါ။
Holiday မှာ ကျွန်မလိုပဲ သွားစရာမရှိ ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာ ထိုင်ပြီး အချိန်ကုန်မယ့်သူများ ကြည့်လို့ ရအောင် သတင်းပေးတာပါ။ ဒီအောက်က Link မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မြန်မာ ဇာတ်ကားတွေ၊ သီချင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Myanmar Moives and MTV By JoJudi (YouTube)
ဒီမှာကတော့ စိုင်းစိုင်း သရုပ်ဆောင်တဲ့ သကြားမင်းဒေါ့ကွန်း ဆိုတဲ့ ကားပါ။ ကျွန်မ ကြည့်ပြီးသွားပြီ .. ကြိုက်သလားဆို မကြိုက်ပါဘူးလို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်.။ သကြားမင်းဒေါ့ကွန်ဆိုလို့ဘာများလည်းဆိုပြီး သိချင်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာ၊ တကယ့်ကို ပေါတောတောနိုင်တဲ့ သာမန် ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကား ပါပဲ။ ဇာတ်ကား နာမည်နဲ့တကယ် သက်ဆိုင်တာလည်း ဘာမှ မပါ ပါဘူး။ လူစိတ်ဝင်စားအောင် တမင် ဒီနာမည် ပေးထားတယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အဖြစ်သဘောရိုက်ထားတဲ့ ကားပါလို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကား ကြည့်ဖူးချင်သူများ ဒီ သကြားမင်းဒေါ့ကွန်း မှာ သွားကြည့်ကြပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 4/07/2007 10:39:00 AM2comments
ကျွန်မမှာရှိနေတဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော အီတိုးရဲ့ သီချင်းပါ။ ဟိုနေ့ က စတိတ်ရှိုးမှာ အီတိုး သီချင်းဆိုရင် ဒီသီချင်း ပါလိမ့်မယ်လို့ကြိုထင်နေခဲ့တယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ အီတိုးဆိုတဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ဒီတစ်ပုဒ်ကိုပဲ လူတော်တော်များများ သိကြလို့ ပါပဲ။
ဒီသီချင်းကို ပထမဆုံး နားထောင်ဖြစ်တုန်းက သဘောကျသွားတာနဲ့MyanmarMP3.net ကနေ mp3 file ကို Download လုပ်ပြီး သိမ်းထား ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ "ရေပျော်ငှက်တို့ရင်ခုန်သံ (၂)" အခွေထဲကပါ။ ဒီသီချင်း ကျွန်မကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတာကြာပြီဆိုတော့ မကြာမကြာ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့့ ဒီသီချင်းကို စာသားလိုက်ရေးမယ်ဆိုပြီး သေချာနားထောင်ကြည့်တော့မှ တချို့ နေရာတွေမှာ ဘာတွေဆိုသွားမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးလေးတွေမှာ ... "မှာ".. "ပါ"... "ကွာ".... ဘာဆိုသွားမှန်း သေချာ မကြားရပါဘူး။ ကျွန်မ့ ကြားမိသလောက်တော့ လိုက်ရေး ထားလိုက်တယ်။ အီတိုးက သူ့ သီချင်းတွေကို သူကိုယ်တိုင်ရေးလေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီသီချင်းက သူရေးထားတာလား မသိဘူး။ ကျားပေါက်ကလည်း အီတိုးဆိုဖို့သီချင်းတချို့ ရေးပေးဖူးတယ် သိရတယ်။
တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ အခါ သတိရလိုက်တာ
ငါ ဝေးနေခိုက်မှာ မင်းစိတ်ချပါ
ဘယ်သူမှ ငါ ချစ်သလို .. မချစ်နိုင်ပါ
ငါ မရှိတဲ့ အခိုက်မှာ သတိရနေပါ
ငါ မရှိတဲ့ အခိုက်မှာ သတိရနေပါကွာ..
ငါ့သတင်းတွေကြားရင် မင်းစိတ်မရှုပ်နဲ့ 
ဘယ်သူမှ ငါ မချစ်နိုင် .. မင်းလိုပါပဲ
ဒိုးလုံး ရဲ့ ကြင်နာလို့ချစ်ပါရစေ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အီတိုး ပြန်ဆိုထားတာကိုလည်း နားထောင်ဘူးပါ သေးတယ်။ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အီတိုး ဆိုတာက ဒိုးလုံးကိုတော့ ဘယ်မှီနိုင်ပါ့မလဲ။
အီတိုး - ကြင်နာလို့ ချစ်ပါရစေ
Posted by Nay Nay Naing at 4/04/2007 09:10:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 4/04/2007 09:50:00 AM3comments
ဒီနေ့ တော့ အဖော်သူငယ်ချင်းတွေ ကောင်းတာရယ်၊ တစုံတယောက်သော သူက တိုက်တွန်း အားပေးတာတွေရယ်ကြောင့် ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ အနေနဲ့့ စတိတ်ရှိုး သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ သီချင်းတွေကို နှစ်သက်ပေမယ့် လူရှုပ်တဲ့ ပွဲတွေဆို သွားလေ့မရှိ၊ မနှစ်သက်တာကြောင့် ဘယ်စတိတ်ရှိုးမှ သွားမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဒီနေ့သွားကြည့်ဖြစ်တာက Emperor ရဲ့ သင်္ကြန်အကြို ဖျော်ဖြေပွဲပါ။ SP poly ထဲမှာလုပ်တာပါ။ အင်ပါယာ တီးဝိုင်းနဲ့အတူ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ L ဆိုင်းဇီ၊ ရေဗက္ကာဝင်းတို့ က သီချင်းတွေ သီဆို သွားပါတယ်။ Examplez အဖွဲ့ ကတော့ အင်ပါယာနဲ့ တွဲပြီး သီဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ Karaoke ဆိုသလိုမျိုး နောက်ခံဂီတနဲ့ ပဲ သူတို့သီချင်းတွေကို ဆိုသွားပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း အင်ပါရာက တီးပေးလို့ လည်း အဆင်ပြေမယ် မထင်ပါဘူး။ Examplez အဖွဲ့ တွေက ဒါဟာ သူတို့ အတွက် ပထမဆုံးသီဆိုရတဲ့ နိုင်ငံခြား ဖျော်ဖြေမှု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားတယ်။
ပွဲစချိန် ညနေ ၆ နာရီမှာ ပထမဆုံး ဇော်ဝင်းထွဋ်က သီချင်း ၃ ပုဒ် သီဆိုသွားတယ်လို့သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ်။ ကျွန်မ ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ L ဆိုင်းဇီ သီဆိုနေပါပြီ။ L ဆိုင်းဇီ က သူရဲ့ လူကြိုက်များ ထင်ရှားတဲ့ သီချင်းတွေပဲ သီဆိုသွားပါတယ်။ သူ့ သီချင်းတွေကိုတော့ အရင်ထဲက ရင်းနှီးပြီးသား၊ ကြိုက်ပြီးသားမို့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ အရင် ဓာတ်ပုံတွေမှာ မြင်ဖူးထားတာ နည်းနည်းဝနေသလို ရှိပေမယ့် ဒီနေ့မြင်ရတာကတော့ အဆင်ပြေပြေလေးပါပဲ။ ၀တ်ထားတာကတော့ အမိုက်စားပါပဲ။ အရင်တုန်းကထက်စာရင် ပြင်တတ်လာတယ် ဆိုရမယ်။
ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ သီချင်းတွေတော့ ကျွန်မသိပ်မသိပါဘူး။ လူကိုလည်း ဒီနေ့ မှပဲ ဘယ်လို ပုံစံရှိလည်း သေချာသိတော့တာပါ။ တချိန်လုံး လှုပ်ခါနေပြီး အိုက်တင်ထုတ်တာ နည်းနည်းလွန်နေသလို ရှိပေမယ့် ချစ်စရာလေးနဲ့အဆိုးဘူးလို့ဆိုရမယ်။ ကာလသားတွေ အကြိုက်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သတင်းပေးတယ်။ ရေဗက္ကာဝင်းကို မြန်မာပြည်ရဲ့ Britney Spears လို့ပြောတာကြားဖူးတယ် ဆိုပဲ။ သူ့ ကိုယ်သူ ပြောတာလား၊ တခြားသူတွေက မြှောက်ပြောတာလား၊ အချွန်နဲ့ မပြီး ပြောတာလားတော့ အသိပါဘူး။ အရမ်းကို အိုင်တင်အပြည့် လှုပ်ရမ်းပြီး ဆိုသွားတာကတော့ နိုင်ငံခြား အဆိုတော်တွေ စတိုင်ပါပဲ။ သူ့ ရဲ့ သီချင်း မဟုတ်တဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေကိုလည်း ဆိုသွား ပါသေးတယ်။
နောက်ထပ်သီဆိုတာကတော့ မခိုင်ပါ။ ဟိုနေ့ က အပြင်မှာတွေ့ ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အတော်အိုနေပြီဆိုပေမယ့် စင်ပေါ်မှာတော့ သူအလှဆုံးပါပဲ။ ပထမဆုံး ထွက်လာတော့ ၀တ်ထားတာက အစိမ်းရောင် ဂါဝန်နဲ့ ပါ။ သူ့ ထုံးစံအတိုင်း ၀တ်ထားတယ် ပြောရမယ်။ အဝေးကနေတောင် လှမ်းပြီး သတိထားမိစေတာကတော့ သူ့ နားဆွဲကြီးတွေနဲ့ဘယက်ကြီးပါပဲ။ မြူးမြူးကြွကြွနဲ့သီချင်းတွေ သီဆို သွားပါတယ်။ ပွဲထိန်း အတော်ကောင်းပါတယ်။ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေရုံမက ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ တွဲပြီး၊ မျိုးကျော့မြိုင်နဲ့ ရောတွဲပြီးပါ စုံတွဲ သီဆိုသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခေါက် သီဆိုသူကတော့ မျိုးကျော့မြိုင်ပါ။ မျိုးကျော့မြိုင်က တကိုယ်တော် အနေနဲ့စုစုပေါင်း လေးပုဒ်ပဲ ဆိုသွားတဲ့ အတွက် သူသီချင်းတွေ နားထောင်ရတာ အားမရလိုက်ပါဘူး။ သူကတော့ ရိုးရိုးပဲ ၀တ်ထားပါတယ်။ သူ့ ကြည့်ရတာ တမျိုးကြီးပဲ။ နေမကောင်းလို့ များလား။ အရင်က မကြည့်ဖူးတာ ဒါ normal ပုံပဲလား မသိပါဘူး။ ပထမဆုံး သူ့ ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်တဲ့ အနေနဲ့ကျွန်တော့် နာမည် မျိုးကျော့မြိုင်၊ နောက်တော့ သူရဲ့မကောင်းတဲ့ အကျင့်အကြောင်း သီချင်းဆိုမယ်ဆိုတာနဲ့အားလုံးက သိလိုက်ကြတဲ့ သူအမြဲ နောက်ကျတတ်တဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းရယ်၊ သူအသက် ၃၅ ကျော် ၃၆ နား ကပ်နေပေမယ် သူအသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်တုန်းက သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ အကြောင်းကို စပ်ဆိုထားတာပါဆိုတဲ့ ( ခုလည်း ဒီတိုင်းပဲ မပြောင်းလဲ ပါဘူးလို့ပြောသွားတယ်) သီချင်းတစ်ပုဒ်ရယ်။ နောက် နေရာတိုင်းမှာဆိုတဲ့ သီချင်းရယ်ကို သီဆိုသွားပါတယ်။ မျိုးကျော့မြိုင်ဆိုတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သီချင်းကို ကြိုက်တယ်။
မျိုးကျော့မြိုင်နောက်မှာ စင်ပေါ်တက်လာသူတွေက Examplez အဖွဲ့ ပါပဲ။ စိန်နားကပ်တွေ တ၀င်းဝင်းနဲ့သူတို့ ရဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုသွားပါတယ်။ ၄ ယောက်မှာ သုံးယောက်က နားကပ်တွေနဲ့ ပါ။ ထွန်းထွန်း နားကပ်ကတော့ အကြီးဆုံးပါပဲ။ သူတို့၎ ယောက်ထဲမှာ ကျွန်မ သတိထား အထားမိဆုံးကတော့ ထွန်းထွန်း ပါပဲ။ သရုပ်ဆောင်ပါလုပ်နေလို့ လားမသိဘူး အရမ်းကို အိုက်တင်အပြည့်နဲ့သီချင်းဆိုသွားပါတယ်။ တချို့ သီချင်းတွေမှာဆို စင်ရှေ့ လေးမှာ (ဘာလို့ မှန်းတော့ မသိဘူး) ဒူးလေးထောက်ပြီး သီဆိုသွားတာ သနားစရာလေး ပါပဲ။ (တကယ် စိတ်လေတယ်) သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အဲ့ဒီပုံကို အမိအရ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူထားပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ သူတွေကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ Examplez က ကျွန်မ ကြားဖူးနေတဲ့ သူတို့ ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ သီချင်းတွေပဲ ဆိုသွားပါတယ်။ နောက်ထပ်ထွက်မယ့် အခွေက သီချင်းသစ် တပုဒ်ကိုလည်း သီဆိုသွားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းက မြူးတော့ အတော်မြူးပေမယ့် ရှေ့ ကကြည့်တော့ ဘာဖြစ်တယ်၊ နောက်က ကြည့်တော့ ဘာဖြစ်တယ် ဆိုလား ဆိုတဲ့ ( တိကျနေလိုက်တာ) စာသားကလွဲရင် ဘာကိုဆိုသွားမှန်း မသိပါဘူး။
Examplez သီချင်းဆိုနေချိန်မှာ တော်ပါတော့ဆိုပြီး နောက်က အော်နေသူများကို ထွန်းထွန်းက သူတို့ တွေဟာ အဆိုတော်တွေမို့ သီချင်း သီဆိုချင်လွန်းလို့သီဆိုပါရစေ။ နောက်ထပ်ဆိုဖို့နှစ်ပုဒ်ထဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒါဆိုပြီးရင် ဆင်းမှာပါလို့ ပြောပြီး သီဆိုသွားပါတယ်။ သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး အဆိုတော်လုပ်ရတာ အတော် မလွယ်ပါလားလို့ တွေးမိလိုက်တယ်။ နောက် အထဲပြန်ဝင်တော့မယ် လုပ်ပြီးမှာ မခိုင်နဲ့အတူ သီချင်း တစ်ပုဒ်တွဲပြီး သီဆိုပါရစေဆိုပြီး နောက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်နဲ့ တွဲပြီး သီဆိုသွားပါတယ်။ သူတို့ တွေ သီချင်း အားလုံးပေါင်း ဘယ်နှစ်ပုဒ်တွေ ဆိုသွားကြလည်းဆိုတာတော့ ကျွန်မ မမှတ်မိပါဘူး။
ဒုတိယအကြီမ် ထပ်ပြီး စင်ပေါ်တက်လာတဲ့ မခိုင်ကတော့ ဒီတခါ အနက်ရောင်ဘောင်ဘီရှည်နဲ့လှလှပပ လေးပါ။ ဟန်မူယာ အပြည့် နဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ကျေနပ်အောင် သီချင်းအများအပြား ဆိုသွားပါတယ်။ သီချင်းဆိုနေတုန်း ခနခန ရေသောက်တာတော့ တွေ့ ရတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ကတော့ နောက်ပိုင်းကျမှ နည်းနည်း ရေသောက်တာ တွေ့ ရတယ်။ မခိုင်က အားရပါးရ သီချင်းတွေ သီဆိုပြီးနောက် ဇော်ဝင်းထွဋ်ကို ခေါ်လိုက်ပြီး နောက်ဆုံး နှတ်ဆက်တဲ့ အနေနဲ့စုံတွဲသီချင်းတစ်ပုဒ် သီဆိုသွားပါတယ်။
စုံတွဲသီချင်း မဆိုခင်မှာ ဇော်ဝင်းထွဋ်က ပရိတ်သတ်ကြီးကို အိမ်ပြန်ချိန်အထိ သူတာဝန်ယူလိုက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ မျိုးကျော့မြိုင်များ ထပ်သီဆိုဦးမလား မျှော်နေမိတဲ့ ကျွန်မ အတော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားခဲ့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်း ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ တကိုယ်တော် Rock သီချင်းတွေ အများကြီး သီဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရတာတော့ သဘောကျ ကျေနပ်သွားပါတယ်။ ပထမဆုံး သီဆိုတဲ့ ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ကနေ နောက်ဆုံး သီဆိုတဲ့ သီချင်းအထိ အကုန်ကြိုက်တယ်။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ ည သီချင်းနှစ်ပုဒ်လုံးကို ဒီပွဲမှာ သီဆိုသွားပါတယ်။ ဗုံတီးပြီး ဆိုသွားတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ အဲ့ဒီပုံတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ တွေ့ လိုက်တယ်။
ဇော်ဝင်းထွဋ်က သီချင်းတချို့ သီဆို အပြီးမှာ သူ့ သား အီတိုး နဲ့သားအဖတွေ စင်ပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သီချင်း တစ်ပုဒ် ကို သားနဲ့အတူ တွဲဆိုပါတယ်။ သူ့ သားကို အတော်ဖြစ်စေချင်၊ အတော်ပန့် ပိုးပေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ နောက်တော့ အီတိုးက တကိုယ်တော် သီချင်း ၃ ပုဒ် သီဆိုသွားရာမှာ နောက်ဆုံး ဆိုတဲ့ သူ ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်း ဖြစ်တဲ့ စိတ်ချချင်တယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုပဲ ကျွန်မတော့ သေချာကြားလိုက် ပါတယ်။ ရှေ့ က သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုတော့ ဘာတွေဆိုသွားမှန်း မသိလိုက်ပါဘူး။ အဲ့ဒီသီချင်းတွေဟာ သူရဲ့ ပထမဆုံးအခွေထဲက သီချင်းတွေ လို့ ပြောသွားပါတယ်။ သီချင်းခွေ အသစ်ထွက်ရင် နားမထောင်ဖြစ်တောင်မှ သိတာများပေမယ် အီတိုး သီချင်းခွေ ထွက်ပြီးပြီ ဆိုတာကိုတော့ ဒီနေ့ မှပဲ သိလိုက်ရတော့တယ်။ အီတိုးက လူကောင်ကြီးကတော့ သူအဖေထက် ကြီးနေပေမယ့် အသံကတော့ ကလေးသံ မပျောက်သေးပါဘူး။ သီချင်းဆိုနေရင် တစ်ချက် တစ်ချက် အသံပျောက်သွား သလိုပဲ။ အီတိုး သီချင်းဆိုနေချိန်မှာ ယောက်ဖခေါ်ပြီး၊ မင်းအဖေကို မမှီသေးဘူး၊ ထပ်ကြိုးစားလိုက်ဦးလို့အားပေးသူ အတော်များများရဲ့ အသံတွေကိုလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။
အိတိုး သီဆိုပြီးနောက် ဇော်ဝင်းထွဋ်ပြန်ထွက်လားပြီး ဆက်လက် သီဆိုပါတယ်။ဇော်ဝင်းထွဋ်ကိုလည်း ယောက်ခမကြီးလို့အော်ခေါ်နေသံတွေ ကြားရတယ်။ သြော် သမီးရှင်ဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါလားနော်။ ဇော်ဝင်းထွဋ် သီဆိုသွားတဲ့ Rock သီချင်းတွေကိုတော့ အကုန်ကြိုက်ပြီးသားမို့ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ အင်ပါယာ ဖျော်ဖြေပွဲဆိုတော့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ကပဲ အဓိကဖြစ်ပြီး၊ သီချင်းတွေ အများကြီး သီဆိုသွားပါတယ်။ Rock သီချင်းတွေ အပြင် ထူးထူးခြားခြား သီဆိုသွားတဲ့ ၂၀၀၁ လက်ဆောင် သီချင်းကိုလည်းကြားရော အင်္ဂလန်မှာ ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်း စုံတွဲကို အထူး သတိရသွားတယ်။ သူတို့ အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းတပုဒ် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ :D
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ဇော်ဝင်းထွဋ်က မြန်မာတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်၊ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာဆို သူက ဒီမှာ ရှိမှာ မဟုတ်လို့ပရိတ်သတ်တွေကို ကြိုတင်ပြီး နှုတ်ဆက်ပါရစေလို့ အစပျိုးကာ ရှေ့ ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်နေသူတွေကို ရေနဲ့လှမ်းပတ်ပြီး အဖြူကတမျိုး အနီကတမျိုးဆိုပြီး စဆိုလိုက်ရော.. ပရိတ်သတ် အားလုံး သင်္ကြန်ပိုးဝင်သွားပြီး မြူးမြူးကြွကြွနဲ့လိုက်ဆိုကြ၊ အင်း... ရှေ့ ထွက်ကသူ တချို့ ကိုလည်း တွေ့ လိုက်ရ ပါသေးတယ်။ အရင် သီချင်းတွေတုန်းက နောက်ဖတ်မှာ ကနေသူ တချို့ ရှိပေမယ့် ဒီသီချင်းရောက်မှပဲ အရှေ့ မှာ အသေသွားက ကြတော့တာပါပဲ။ နောက်ထပ် သင်္ကြန်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုပြီး အင်ပါယာက အားလုံးကို နှတ်ဆက်၊ ပွဲသိမ်းချိန်မှာ ည ၁၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ။
ဒီပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံအများအပြားကို ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ ရဲ့ အုန်းသီးကြီးတွေ သုံးပြီး တစ်ယောက်ကို ပုံ ၂၀၀ နီးပါးလောက် ရိုက်ထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ သူတို့ တွေဟာ ဓာတ်ပုံတွေ မပို့ အား၊ အင်တာနက်ပေါ် မတင်အားလောက်အောင် အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေပါတယ်ဆိုလို့နောက်ပိုင်း သူတို့ အားတော့မှပဲ အဲ့ဒီပုံတွေကို ကြည့်လို့ ရပါတော့မယ်။ မအားတဲ့ ကြားက ခု ဒီပိုစ့်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပို့ ဖြစ်အောင်ပို့ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ချင်နေတဲ့ ကျွန်မ... သူတို့ တွေကို ရှုပ်နေစေသော အလုပ်များ မြန်မြန်ရှင်းသွားပါစေလို့ဆုတောင်းနေရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတော့တယ်..
Labels: Diary, Music, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 4/02/2007 12:42:00 PM 10 comments
ဒီနေ့ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ..
တချို့ ကတော့ April Fool နေ့ ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စနောက်ကြတယ်။
ကျွန်မကတော့ သူများကို နောက်ဖို့ လည်း ၀ါသနာ မပါသလို .. ကိုယ့်ကို လာနောက်ရင်လည်း သိပ်ကြိုက်လေ့ မရှိသူဖြစ်လို့အဲ့ဒီ April Fool ( 1st April ) ဆိုတာကြီးကို အရင်ထဲက ထူးပြီး စိတ်ဝင်စားလေ့ မရှိပါဘူး။
ကျွန်မသိတဲ့ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ က ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ ။ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်း ဒီမှာ ရှိနေရင် ဒီနေ့ ဆို တနင်္ဂနွေနေ့ လည်း ဖြစ်ပြန်၊ သူ့ မွေးနေ့ လည်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ မုန့် လိုက်ကျွေးခိုင်းလို့ရမှာတွေးမိပြီး ရန်ကုန်ပြန်ပြီး ပျော်နေသူ သူငယ်ချင်းကို အထူးသတိရ နေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ ခုချိန်ဆို ချောင်းသာမှာ အတော် ပျော်နေရှာမယ် ထင်တယ်။ သူ့ ရဲ့ မွေးနေ့ မှာ မွေးနေ့ ရှင်ဟာ ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင်ပကို ရောက်နေမှာဖြစ်ကြောင်း သိနေခဲ့တာကြောင့် ကြိုတင်ပြီး မွေးနေ့ ဆုတောင်း လုပ်ပြီးသား ဖြစ်လို့ဒီနေ့ မှာ ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးဖို့လိုမယ် မထင်တော့ဘူး။ မွေးနေ့ ရှင် ကလည်း ခုချိန်မှာ " ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေ" ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းကို ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးစရာမလို ပဲနဲ့ ကို ပြည့် နေလောက်ပြီ။
အင်း.. ဒီအချိန်ဆို သူငယ်ချင်းက သူပြောထားတဲ့ ချောင်းသာရောက်ရင် Sea Food တွေ၊ အထူးသဖြင့် ဂဏန်းဟင်းကို အားပါးတရ စားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အစားတွေ အနင့်တပိုးစားပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူရဲ့ ညောင်းညာနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကိုလည်း အစာကျွေးနေလေမလား....
Posted by Nay Nay Naing at 4/02/2007 12:40:00 PM0comments
တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ဝေးကွာနေကြသော ချစ်သူများသို့...
ရောင်နီကို ကြိုလင့်တဲ့ ပန်းကလေးတွေ .. အချစ်ဆုံးရဲ့ အနံ့ အသက်ကို ယူခဲ့ပြီ..
နေ၀င်ချိန် အိပ်တန်းတက်ငှက်လေးတွေ .. အချစ်ဆုံးရဲ့ သတင်းစကားကို ဆောင်ခဲ့ပြီး
နေခြည်တွေ ခြုံလွှမ်းတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ .. အချစ်ဆုံးရဲ့ အနွေးဓာတ်ကို ပြန်ရပြီ
လေပြေကလေး ဆော့ကစားတဲ့ ညချမ်းမှာ.. အချစ်ဆုံးရဲ့ အထိအတွေ့ ကိုပြန်ရပြီ
ဘယ်စီကို ရောက်လို့ နေ .. ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးရတယ် .. ဘယ်တော့မှ အထီကျန်း မဆန်ခဲ့ ..
ရင်ထဲက တမ်းတလိုက်ရုံလေးနဲ့..ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မင်းရှိတယ်..
လူတွေက ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ခွဲရလို့.. အကုန်ဝိုင်းပြီး သနားကြသတဲ့ အချစ်ကလေးရယ်
ဒီကမ္ဘာမှာ ကိုယ်တို့ လောက်နီးကပ်တာ .. ဘာတစ်ခုမှ မရှိတော့တာ မသိဘူးရယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 4/01/2007 11:44:00 AM4comments